Beravina Morafenobe Avotra ireo mpianaka nataon'ny dahalo takalonaina
Fanafihana tany Est Vinany Lasa ny basy sy ny vola rehetra
Mpandraharaha iray mipetraka sy monina ao amin'ny Fokontany Est Vinany any Ambositra, toerana fantatra amin’ny hoe: ampitan'ny Tany Malalaka, notafihan'ny dahalo mitam-basy ny sabotsy alina tamin'ny 12 ora sy sasany teo ho eo, raha ny vaovao azo.
Ambohijatovo Efa-dahy mitam-basy nanendaka vehivavy
Vehivavy iray novelesin` ireo jiolahy miisa efatra teo amin’ny lohany, notaritaritina tamin’ny tany.
Toamasina Maty voatifitry ny polisy ilay mpamaky trano
Toamasina no lavon’ny balan’ny mpitandro ny filaminana tao Toamasina ny faran’ny herinandro teo.
Vono olona feno habibiana Notapahana ny loha sy ny tanan’ilay rangahy
Efa mivadika biby ny olombelona. Raim-pianakaviana iray 52 taona no maty notapahin-doha sy tanana tao Anjombalava, Kaominina Ambanivohitr’i Anjagnoveratra, distrikan’i Sambava ny 07 oktobra lasa teo.
Fifandonana tao Malaimbandy Avotry ny zandary ireo takalon’aina telo
Avotra soamantsara ireo telo mianaka nalain'ny dahalo takalonaina nandritry ny fanafihana sy halatr'omby tao Ambinagnisoa, fokontany Mahasoa/Pomay, kaominin’i Malaimbandy, faritr’i Menabe, ny alin'ny 6 hifoha 7 oktobra teo tamin'ny 2 maraina, hoy ny fampitam-baovao.
Avotra ireo takalonaina miisa roa, tafaverina avokoa ny omby telo voaroba. Notafihin’ny dahalo mirongo basy tao Mahavelona Fokontany Ampoza Beravina ny harivan'ny 20 aogositra 2020.
0mby miisa telo, lamba sy firavaka sarobidy ary vola mitentina enina hetsy Ariary no norobain'ireo dahalo tamin’izany ary naka takalonaina roa izy ireo hampihorohoroana sy hanakanana ireo mpanaradia. Nanao ara-dia avy hatrany ny Zandary avy ao amin’ny « Poste Avancé » Ankalalo, nitarika ireo Fokonolona tany an-toerana. Nisy ihany koa Zandary avy ao amin’ny kompania Morafenobe niainga tao Beravina hamonjy ny kizo tany Ankaramenabe ary nanao toy izany koa ny zandary tao Akondromena sy ny Tafika ZRPS hisakanana ireto dahalo ireto tao Ambonara sy hamonjena ny takalonaina. Ny zoma 21 aogositra maraina vao tratra tao Mamoladahy Marotahalaka any Soaloka Distrikan'i Miandrivazo ireo dahalo. Nisy avy hatrany ny fifampitifirana ka vaky nandositra ireo dahalo. Avotra soa aman-tsara ireo takalonaina roa toy izany koa ireo omby halatra telo.